बाँकेमा थप आठजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु - Web Tv Khabar
बाँकेमा थप आठजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
बैशाख ३१, २०७८ शुक्रवार ०७:५८ बजे
नेपालगञ्ज । बाँकेमा थप आठजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, बाँकेका फोकलपर्सन तेजबहादुर वलीले ५ जना भेरी अस्पताल, दुईजना कोहलपुर मेडिकल कलेज र एकजनाको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको जानकारी दिए ।
खजुरा गाउँपालिका वडा नं.१ का ६४ वर्षीया महिलाको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको छ । वैशाख २८ गते भेरीमा पीसीआर गरिएका उनलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको थियो । कैलाली लम्कीचुहाका ४० वर्षीय पुरुषको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । वैशाख २९ गते पीसीआर गरिएका उनलाई ३० गते भर्ना गरिएको थियो । सल्यान कुमाख गाउँपालिकाका वडा नं.१ का ६७ वर्षीया महिलाको भेरीमा मृत्यु भएको छ । वैशाख १८ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २५ गते भर्ना गरिएको थियो ।
बर्दिया मधुवन नगरपालिका वडा नं. ६ का ५९ वर्षीय पुरुषको भेरीमा मृत्यु भएको छ । वैशाख १५ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २७ गते भर्ना गरिएको थियो । बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ६ का ३५ वर्षीया महिलाको भेरीमा मृत्यु भएको छ । वैशाख २६ गते पीसीआर गरिएका उनलाई त्यही दिन भर्ना गरिएको थियो । खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ३ का ७५ वर्षीया महिलाको भेरीमा मृत्यु भएको छ । वैशाख २३ गते भर्ना भएका उनको २५ गते पीसीआर गरिएको थियो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.५ का ६१ वर्षीया महिलाको भेरीमा मृत्यु भएको छ । वैशाख २० गते पीसीआर गरिएका उनलाई २५ गते भर्ना गरिएको थियो । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.२ का २८ वर्षीय पुरुषको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । वैशाख २४ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २६ गते भर्ना गरिएको थियो । योसँगै बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय २२ जना पुगेको छ । बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ उपचार गराउन आउँदा एक सय ६७ जनाको मृत्यु भएको छ ।